Manempotra An’i Tehran Indray ny Setroka · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 18 Novambra 2016 11:40 GMT
Pejy voalohan'ny Javan, gazety mpivoaka isan'andro ao Tehran, miaraka ny lohateny (amin'ny sary): “Ny fahafatesana mangina nahazo ireo olom-pirenena tao anatin'ny rivotra maloto.” Dikasary avy amin'ny Jaaar.com.
Namoahana fampitandremana momba ny setroka amin'ity herinandro ity ny Iraniana, manomboka ny andro Alatsinainy tamin'ny filazana fa tokony hijanona ao an-trano, na manao saron-tava raha hivoaka any ivelany.
Fantatra amin'ny zavatra maro i Tehran- tanàna mihetsiketsika feno kolontsaina, fiainana, renivohi-pirenena sy tanàna goavana lehibe indrindra fahatelo ao Afovoany Atsinanana (aorian'ny Kairo sy Istanbul). Saingy ny zavatra tokana nipetraka ankoatra ny maha tanàna goavana manodidina azy dia ny setroka maharitra.
Nihamafy ny olana tato anatin'ny taona vitsivitsy. Tamin'ny Desambra 2015, nomena fampitandremana tsy mbola nisy toy izany i Tehran fa impito ny loton'ny rivotra, haavo ambony indrindra araka ny soso-kevitry ny sampan'ny Firenena Mikambana misahana ny Fahasalamana (WHO=OMS). Tsy mbola tratra ny haavo ambony indrindra tamin'ny herintaona, saingy tamin'ny 13 Novambra 2016, nisy ny fampitandremana tahaka izany navoaka ho an'ny loto in-telo avo heny noho ny tolo-kevitry ny OMS.
Nakatona ny sekoly tamin'ny Alatsinainy ary mbola mikatona mandritra ny herinandro, araka ny baikon'ny Minisiteran'ny Fanabeazana. Nampitandremana ireo mponina mba tsy hivoaka raha tsy hoe tena tsy maintsy atao, miaraka amin'ny fampitandremana manokana fa tokony mijanona ao an-trano ny antitra, ny ankizy, ny bevohoka sy ireo manana olana ara-pisefoana. Antenaina tsy hanan-kery intsony ny fampitandremana amin'ny Alarobia rehefa misy ny rivotra antenaina hanosika ny rivotra mihandrona sady maloto.
Lasa olam-pirenena isan-taona ny setroka satria mangatsiaka ny andro. Mamandrika ny haavon'ny rivotra ao an-tanàna, ateraky ny fiara antitra an-tapitrisany sy ny moto ao ao an-tanàna misy mponina 10 tapitrisa ny andro mangatsiaka.
Nanjary lasa adihevitra politika ny olana, indrindra fa manome tsiny ny fitantanana tony an'i Hassan Rouhani ireo hiringiriny noho ny tsy fahombiazana amin'ny politikan'izy ireo momba ny tontolo iainana. Tsy mahagaga araka izany raha namoaka lohateny ny gazety hiringiriny Javan tamin'ny Alatsinainy milaza hoe “ny fahafatesana milamina mangina nahazo ireo olom-pirenena tao anatin'ny rivotra maloto.” Milaza ny fikarohana tamin'ny 2014-2015 ny lahatsoratra tamin'ny pejin'izy ireo voalohany izay nilaza fa mponina 5.158 tao Téhéran no namoy ny ainy noho ny olana ara-pisefoana nateraky ny fandotoana.
Fantatra fa tamin'ity herinandro ity, mponina marobe ao Tehran no mbola nanohy ny fanaon'izy ireo andavanandro araka ny mahazatra, na dia maro aza ireo nanao saron-tava na niezaka nampiasa ny rafitra metro mandroso ao an-tanàna
Tilikambo Milad ao Tehran tamin'ny andro maraina. Sary tao amin'ny Wikimedia commons avy amin'i Nima J72, CC BY-SA 4.0.
Ny sary miverimberina nipoitra tao amin'ny kaonty Instagram sy Telegram Iraniana dia ny Tilikambo Milad malaza ao Tehran, na sempotry ny setroka na mitondra saron-tava mba hiadiana amin'ny setroka. Ireto misy santionany vitsivitsy avy amin'ireo mpiserasera Instagram ao Téhéran, mampiseho ny tilikambo ao anatin'ny setroky ny tanàna.
Amin'ny voalohany, mitabataba ny tilikambo hoe “Komak,”vonjeo” amin'ny teny Persiana, satria voahodidina rivotra maloto izy:
Without explanation #air_pollution #Tehran #Milad_Tower #air_pollution_Tehran #density #smog_Iran #my_iran #iran_creation #long_live_iran_and_iranians #lasting_wind_iran_irania #my_iran #work #profession #occupation #future_profession #made_in_iran #made_in_iran_98 #velt #officials
Tsy misy fanazavana #fandotoandrivotra #Tehran #Tilikambo_Milad
Amin'ny lahatsoratra faharoa, manararaotra ny setroka ny mpisera iray mba hanao tononkalom-pitiavana ho an'ny sakaiza nandao, ka ny setroka no misolo ny fahabangana:
Just when you left Tehran the pollution started — towards smog, towards absence — come back and make us better. #hope_divsalar #hope_forSalar #smog #heart #Tehran #milad_Tower #typography #heart #way #good_weather #divsalar #poetry #mask #literature #typography #farsi_typogaphy #iloveyou #polluted_weather #white_poetry #romantic #sonnet #comeback #photo #photography #illustration #design #photoshop #illustrator
Raha vao nandao an'i Tehran ianao, nanomboka ny loto — manoloana ny setroka, manoloana ny fahabangana — miverina ary mahatonga anay ho tsara kokoa.
Nalefa miaraka amin'ny fanazavana matroka mamaritra ny fanapoizinana ny vahoaka ao an-tanàna ny sary farany, sariitatry ny tilikambo miaraka amin'ny mponin'i Téhéran nahatratra izany an-jambany:
#temporary_post… #writer_image. I came out onto the heavens. #smog was within my city's atmosphere and there was a shortage of air… #wrote_smog #for it #the_smoke_anddust_to be resolved #Tehran for the people is like the world…#irony_written #smoke from car exhausts have clogged my heart and brought my fearful head to finally bald…#wrote_lead. #a wound and #smog has gone down my throat and taken the portion of my enemy and rogue enemies…#foundation_written. #poison it is #smog, in this situation I think turn us to honey…#tehran_polluted #weather_pollution #Tehran's_breath_taken #lazuli_sky_ofmyTehran_mywish #pollution_and_smog_ourcity's_situation #smog_has_taken_our_breath_away
Nivoaka nakany an-habakabaka aho. Tao anatin'ny tontolon'ny tanànako ny #setroka ary tsy ampy ny rivotra… #manoratra zavo-tsetroka #mila vahana ny olan'ny setroka sy ny vovoka, ho an'ny vahoaka i #Tehran no izao tontolo izao-ny…#irony_written nanentsina ny foko ny #setroka avy amin'ny rivotra maloton'ny fiara ary nitondra ny lohako saro-tahotra ho lasa sola nony farany…#wrote_lead. Nidina tany amin'ny tratrako ny #ratra sy #setroka ary nahazo ny fahavaloko sy ny jiolahy fahavaloko…#foundation_written. #poizina dia #setroka, amin'ity toe-javatra ity, mino aho fa hitondra antsika any amin'ny volan-tantely…#tehran_polluted #weather_pollution #Tehran's_breath_taken #lazuli_sky_ofmyTehran_mywish #pollution_and_smog_ourcity's_situation #smog_has_taken_our_breath_awayo